कस्तो कपालमा कुन तेल लगाउने ! कसरी प्रयोग गर्ने तेल ? (जान्नुहोस्) « Thahaonline.com | थाहा अनलाइन
कस्तो कपालमा कुन तेल लगाउने ! कसरी प्रयोग गर्ने तेल ? (जान्नुहोस्)
१३ पुष २०७५, शुक्रबार ०९:०६ मा प्रकाशित
कपालमा तेल लगाउने पनि तरिका हुन्छ । कपालअनुसार फरक–फरक तेल आवश्यक पर्न सक्छ । कसरी प्रयोग गर्ने तेल ?